Mariela Carril | | ဘာလီကျွန်း, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
ကမ္ဘာပေါ်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနှင့်ကျော်ကြားသောခရီးသွား dest ည့်နေရာများအနက်တစ်ခုမှာ ဘာလီကျွန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလှအပ၊ ကမ်းခြေ၊ အာရှထူးခြားဆန်းပြားမှုအကြောင်းပြောဆိုမည်ဆိုလျှင်ဘာလီသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနေရာများ၏စာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရှိသည်။
ဘာလီကပိုင်ဆိုင်သည် အင်ဒိုနီးရှား နှင့်၎င်း၏စီးပွားရေး၏ 80% ခန့်သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်အခြေခံသည်, ဒါကြောင့်ယနေ့ရက်သတ္တပတ်စတင်ကျနော်တို့မြင်ရပါလိမ့်မယ် ဘာလီမှာကြည့်ဖို့ဘာ။ နေထဲ၌အိပ်နေရုံနှင့်ပူနွေးသောရေတွင်ကူးနေခြင်းလောသို့မဟုတ်ဤမျှလောက်များလွန်းနေသလော။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ဘာလီသည်အင်ဒိုနီးရှား၏ပြည်နယ်ဖြစ်ပြီးမြို့တော်မှာဒန်ပါဆာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အငန်ပါးသောဆူဒန်ကျွန်းစုတွင်ပါဝင်ပြီးလူ ဦး ရေမှာဟိန္ဒူလူမျိုးများဖြစ်သည်။ ကျွန်းတစ်ကျွန်းတည်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကလူသိများတဲ့ofရိယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် Coral တြိဂံဥပမာအားဖြင့်ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်၌တွေ့ရှိရသောသန္တာကျောက်တန်းထက်ခုနစ်ဆပိုများသည်။
ဘာလီသည်ဂျာဗားမှ ၃ ကီလိုမီတာအကွာတွင်ရှိပြီးမီတာ ၂၀၀၀ ခန့်ရှိသောတောင်တန်းများရှိပြီးမီးတောင်ရှင်များ၊ မြစ်များ၊ သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိရာသီဥတုရှိသည်။ 30 ºCတစ်နှစ်လုံး အလွန်မြင့်မားစိုထိုင်းဆနှင့်အတူ။ ရလဒ်? အများကြီးပူ။ အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်နီးပါးအမြဲ။
ဒီရာသီဥတုနှင့်အတူရှိ၏ မုတ်သုန်ရာသီ။ အောက်တိုဘာမှAprilပြီလ၊ ဒီဇင်ဘာလမှမတ်လကြားကာလအတွင်း၊ ထိုရက်စွဲကိုပင်စဉ်းစားရန်မလိုတော့ပါ။
ဘာလီကျွန်းသည်သေးငယ်သည်ကီလိုမီတာ ၁၄၀ မှ ၈၀ အကြား၊ Java နှင့် Lombock ကြားတွင်ရှိသည်။ မီးတောင်ကျွန်းတစ်ကျွန်းဖြစ်ပြီးသာယာလှပသည့်ရှုခင်းများနှင့်မြေသြဇာကောင်းသောမြေများဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးမှာအုန်းတောင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်းသည်လူ ဦး ရေသန်းနှစ်သန်းခွဲခန့်ရှိသောကြောင့်ထိုတွင်ရှိသည် မြင့်မားသောလူ ဦး ရေသိပ်သည်းမှု.
ဘာလီသည်စုံလင်သောရှုခင်းများနှင့်ဖြစ်ရပ်များကိုမိသားစု ဦး တည်ရာ၊ ဝိညာဏသန့်ရှင်းရာဌာန၊ စွန့်စားသူ၏ပရဒိသု၊ အစားကောင်းကြိုက်သူများ နှင့် surfers နှင့် caramel စုံတွဲများ။ ဘာကြောင့်စလုပ်ကြရအောင် ဘာလီမှာငါတို့သိနိုင်တယ်။
သငျသညျအကောင်းဆုံးသဘောသဘာဝအတွက်ရှုမြင်သုံးသပ်ကြဘာသာတရားကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ဦး တည်ရာကိုဖြစ်ပါတယ် Tanah Lot ဘုရားကျောင်း။ ကျောက်တုံးပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသောဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသည်ကမ်းရိုးတန်းမှလှေခါးထစ်များနှင့်ကျွန်းပေါ်ရှိအသုံးအများဆုံးပို့စကတ်ဖြစ်သည်။ Dempasar မြို့ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက် ၂၀ ကီလိုမီတာအကွာအဝေးကိုသင်တွေ့နိုင်ပြီး၎င်းမှတည်ရှိသည် ရာစု XVI ။
နောက်ထပ်လှပသောဗိမာန်တော်သည် Ulun Danu ဘုရားကျောင်းBegedul ရှိ Baratan ရေကန်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အဆောက်အ ဦး သည်လှပပြီးရေကန်၏နတ်ဘုရားမထံအပ်နှံသည်။ ဆိတ်ငြိမ်ပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်သောနေရာဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ယူနက်စကိုမှကြေငြာသောဆိုဒ်များသို့လည်ပတ်မှုပြီးဆုံးရန် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ကျွန်တော်တို့မှာ Jatilage: စပါးခင်းများရှိသည်s မင်္ဂလာပါ။
ဂရင်း Jatiluwih ဆန်လယ်ကွင်း, စွန်ပလွံပင်များကဝိုင်းရံ, များစွာသောဓာတ်ပုံများကိုခံထိုက်ပေသည်။ ဒါဟာသူတို့တွင်လမ်းလျှောက်ဖို့လှပသောအတွေ့အကြုံနှင့်အတိအကျကြောင့်အမည်တူဆိုလိုသည်: jati y လက်ငင်းအတူတူသူတို့တကယ်အံ့သြစရာကိုဆိုလိုတာ။ ဤဒေသသည် Tabanan ခရိုင်၏မြောက်ဘက်တွင်ရှိပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်မီတာ ၈၀၀၊ Denpasar မှ ၄၈ ကီလိုမီတာနှင့် Tabanan မှ ၂၉ ခုရှိသည်။ တွန်းလှန်ကိုမမေ့ပါနှင့်!
သဘာဝနှင့်အဆက်အသွယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် မျောက်သစ်တော နှင့် Ubud ရှိသူ၏ဟိန္ဒူရှုပ်ထွေးသော။ အဆိုပါအဆောက်အ ဦး တွင်မျောက် ၅၀၀ ခန့်ရှိပြီး ၁၄ ရာစုမှဆက်ရှိနေသောဘုရားကျောင်း ၃ ခုရှိသည်။ ယနေ့areaရိယာတစ်ခုလုံးသည်သဘာဝအရံတစ်ခု ဖြစ်၍ တိရစ္ဆာန်များကိုငှက်ပျောသီးစားရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည်။ သင်လည်းသွားနိုင်သည် Tirta Empul, ဘုရားကျောင်းရှုပ်ထွေး ၎င်းသည် Ubud အပြင်ဘက်တွင်ရှိပြီးတောင်များမှရေများစီးဝင်သောကန်များစွာရှိသည်။
အတိအကျဆိုပါက၊ Julia Roberts, Eat, Pray and Love နှင့်အတူရုပ်ရှင်ကိုသင်မြင်ခဲ့လျှင်၊ ဒီဆိုဒ်ကိုသင်မှတ်မိလိမ့်မည်။ ရေများသည်ဟိန္ဒူအားလုံးအတွက်သန့်ရှင်းသည်ဟုဆိုကြသည်။ မည်သူမဆိုသူတို့ကိုရေချိုးနိုင်အောင် join နိုင်!
Batur တောင်သို့တက်ပါ ဒါ့အပြင်ကောင်းကောင်းလေ့လာရေးခရီးဖြစ်နိုင်ပါတယ် ၎င်းသည်အမြင့် ၁၇၀၀ မီတာရှိပြီးဘာလီတွင်အကျော်ကြားဆုံးမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စီစဉ်ထားသည့်လေ့လာရေးခရီးများသည်များသောအားဖြင့်နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင်စတင်လေ့ရှိပြီးပြင်ဆင်ပါ။ The နေခြည်မြင်ကွင်း ၎င်း၏ထိပ်ဖျားမှလှပသည်။ အထူးသဖြင့်တောင်တန်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်နံနက်နေရောင်ကိုထင်ဟပ်စေသောရေကန်ရှိသည်။
ဘာလီ၏သဘောသဘာဝနှင့်ဆက်နွှယ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် Ayung မြစ်ပေါ်တွင်ဖောင်။ ၎င်းကိုမြစ်ကမ်းပေါ်ရှိသာယာလှပသောကျေးရွာများနှင့်ရေစီးဆင်းမှုနှင့်အတူစိမ်းလန်းစိုပြေသောသစ်တောများမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပိုမိုသာယာသည့်ရေလှုပ်ရှားမှုများအတွက် ဦး တည်ရာသည်ဖြစ်သင့်သည်။ Sanursurfing၊ paragliding နှင့် paddle boarding ။ The kuta ကမ်းခြေ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ surfers များကိုဆွဲဆောင်သည်။ အခြားရေအားကစားများအတွက် Tanjung benoaဥပမာရေဂျက်ထုပ်။
ရေငုပ်ခြင်းသည်သင်၏အရာဖြစ်ပါကသင်လုပ်နိုင်သည် Tulamben အတွက်သင်္ဘောပျက်ချငုပ်ဖြေ - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ USAT Liberty နစ်မြုပ်နေပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာရေပန်းစားဆုံးနေရာတစ်ခုပါ။ ငုပ်ရန်နောက်ထပ် site တစ်ခု Padang Bai, ဘာလီအရှေ့နှင့်ကမ်းရိုးတန်းမှသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ကွဲပြားခြားနားသောနေရာခုနစ်ခုနှင့်အတူ။ နောက်တစ်ခုက အာမင် အလွန်ထင်ရှားသောမြင်သာမှုနှင့်အနည်းငယ်စျေးနှုန်းချိုသာရေငုပ်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အတူအနိမ့်လူသိများ ဦး တည်ရာ။
ဘာလီတွင်သင်လုပ်နိုင်၊ မြင်နိုင်သောအရာများထဲမှတစ်ခုမှာလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည် ဘာလီတိရိစ္ဆာန်ရုံအရှေ့တောင်အာရှတိရိစ္ဆာန်များကိုကျား၊ ကြံ့၊ ဆင်နှင့်ရောင်စုံသောငှက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်အတူနောက်ထပ် site ကိုဖြစ်ပါတယ် ဘာလီရေကြောင်းနှင့် Safari ဥယျာဉ်။ သင်သည်လည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည် ချောကလက်စက်ရုံ။ အင်ဒိုနီးရှားသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကိုကိုးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောချောကလက်များကိုပြုလုပ်သည်။
အစမှာငါတို့ဘာလီကျွန်းနားမှာကျွန်းသေးသေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရလို့မင်းတို့ခရီးစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် Menjanga ကျွန်းပေါ်တွင်တစ်နေ့တာဖြုန်းပါဘာလီအနောက်မြောက်ဘက်။ ဤတွင်သင်သည် Menjangan အမျိုးသားအဏ္ဏဝါဥယျာဉ်ကို ဖြတ်၍ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပြီးတောင်တက်ခြင်း၊ ရောင်စုံငါးများနှင့်အတူရေငုပ်ခြင်း၊ လိပ်များကိုတွေ့မြင်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားနိုင်သည်။
ကျေးရွာများသို့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလာရောက်လည်ပတ်မှုများ၊ ငါးနှင့်ပင်လယ်စာများအပေါ် အခြေခံ၍ အစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောထုံးတမ်းစဉ်လာများကိုထည့်သွင်းခြင်း၊ နေ့စဉ်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်တစ်ခုကိုခံစားရခြင်း (သို့) ကူတာရှိဘားဆိုင်များသို့သွားခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း။ ကျွန်ုပ်၏အကြံပေးချက်မှာသင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်အတွင်းဤလှုပ်ရှားမှုများကိုပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည့်ကမ်းခြေ၊ အားကစား၊ လေ့လာရေးခရီး၊ အပန်းဖြေခြင်း၊ ယောဂအချို့နှင့်အစားအစာများစွာကိုစုစည်းနိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ?
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » မြို့ကြီးများ » ဘာလီကျွန်း » ဘာလီမှာဘာကြည့်ရလဲ
အဘယ်အရာကို Wroclaw အတွက်ကြည့်ပါ